Xildhibaanada Mooshinka ka Keenay Madaxweyne Farmaajo Oo Ka Hadlay Go'aanka Xog-haye Buux - Ceelhuur Online
Home > Wararka Maanta > Xildhibaanada Mooshinka ka Keenay Madaxweyne Farmaajo Oo Ka Hadlay Go’aanka Xog-haye Buux
December 11, 2018 716
Xildhibaannada sheegay in ay gudibiyeen mooshinka ka dhanka ah madaxweynaha ayaa waxaa ay sheegeen in go’aanka uu Buux ku sheegay in mooshinka buray ay been abuurtahay.
Waxaa ay sheegeen in mooshinkaasi sharci yahay islamarkaana madaxweynaha laga doonayo in uu u hoggaansamo.
Xildhibaanada ayaa shir jaraa’id oo ay ku qabteen Xarunta Villa Hargeysa,waxa ay uga hadleen halka uu marayo mooshinka ka dhanka ah madaxweynaha Soomaaliya,waxaana uu hadalkooda u qornaa sidan.
Doodda Mooshinka ka dhanka ah Madaxweynaha ayaa wali ka sii socota Muqdisho,iyada oo isha lagu wadahayo hadba isbeddelka ka iman kara mooshinka muranka dhaliyay.
Madaxweyne Farmaajo oo warqadaha aqoonsiga ka guddoomey Danjireyaasha Masar iyo Indonesia
M. Xaashi oo taageeray in dib loo dhigo doorashada Madaxweynaha Galmudug